दुई बर्ष अघिको बाढीले खोसेको खुसी अब भने मोरङको बेलबारीको लोहन्द्रामा फर्कने तयारीमा ! (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
दुई बर्ष अघिको बाढीले खोसेको खुसी अब भने मोरङको बेलबारीको लोहन्द्रामा फर्कने तयारीमा ! (भिडियो)
१. दुई बर्ष अघिको बाढीले खोसेको खुसी अब भने मोरङको बेलबारीको लोहन्द्रामा फर्कने तयारीमा
भारी बर्षाले ल्याउने बाढी तराईका अधिकांश स्थानमा श्राप झै बन्ने गर्छन । कहिले सिंचाईको अभावमा सुन झै धान फल्ने खेतका गराहरु बाँझै वस्न बाध्य बन्छन् । हुन पनि नेपालको तराई भूभागलाई अन्नको भण्डार मानिदै आइएको छ नेपालको नक्सा कोरिए देखिनै ।
तर, यही अन्नको भण्डारमा कहिले बाढीको विनाशलीला, कहिले डुवानको समस्या र अधिकांश स्थानमा भनेको बेलामा सिंचाई उपलब्ध नहुने व्यवस्थाले अन्नको भण्डारले सक्ने जति उत्पादन दिन सकिरहेको छैन । यही अवस्था भोग्दै आएको छ पूर्वको मोरङका कतिपय गाउँहरुले पनि ।
यही नियति भोग्दै आएको छ मोरङको बेलबारी नगरपालिकामा पर्ने लोहन्द्राले पनि । दुई बर्ष अघिको बाढीले लोहन्द्रा नदीमा रहेको साइफनसहितको पुल बगायो । यसपछि त्यस क्षेत्रका ठूलो हिस्सा ओगटेका हजारौको भाग्यमा लागेको विर्को अझै खुल्न सकेको छैन ।
२०७४ साल साउन २८ गते आएको बाढीले सुनसरी मोरङ सिचाई आयोजनाको मुल नहरमा रहेको साईफन सहितको सो पुल बगाउदा त्यस पूर्वको करिब ११ किलोमिटर क्षेत्रको १५ हजार हेक्टर जग्गामा सिचाई सुविधा अभाव भएको थियो ।
पुल बगाएपछि पुल पूर्व र पश्चिम बस्नेहरुलाई किनमेल, बजार आउजाउ र अन्य गतिविधिमा पनि समस्या पर्दै आयो । पुल नभएकै कारण भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था समेत उत्पन्न भएको थियो । पुलको अभावमा कोही विद्यार्थी दुई बर्षदेखि आफनो घर फर्कन पाएका छैनन भने चुनावी मुद्दा समेत बनेको लोहन्द्रा पुल अब भने बल्ल बन्ने भएको छ ।
जस्ले त्यो क्षेत्रका ठूलो हिस्साका जनताले राहतको महसुस गर्न थालेका छन् । सिंचाईको लागि नयाँ सम्भावनाको अध्ययन टुंगिएको छ भने ४५ करोडको लागतमा दुई बर्ष भित्र साइफनसहितको पुल निर्माण हुने भएको छ ।